Archive du 20180615
Tolona ho an’ny fanovana Diabe ho eny Mahazoarivo anio
Manomboka vaky bantsilana tsikelikely ny paipaika tsy nisy fangaraharana niainga tany amin’ny fametrahana ny praiminisitra.
Antananarivo Raikitra ny barazy
Miha mahery vaika ny hetsi-panoherana eo anatrehan’ny mbola namerenana ireo minisitra HVM ao anaty governemanta. Nanao diabe nihazo ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika tetsy Tsimbazaza ny mpianatry ny oniversiten’Ankatso omaly maraina noho ny tsy fankasitrahana an-dRtoa Rasoazananera Marie Monique.
Razafimahefa Tianarivelo Niantso ireo Administratera sivily hifanome tanana aminy
Tonga nitsidika ara-pomba fifanajana ny minisitry ny Atitany vaovao Razafimahefa Tianarivelo tesy Anosy ny Sendikan’ny Administratera Sivily eto Madagasikara na SYNAD
Mbola Rajaonah Efa niala tamin-dRajao ihany koa …
Tsy takona afenina intsony fa efa tena marary ny fitondrana HVM. tsikaritra izany amin’ny fiovan’ny firesak’ireo mpanentana sasany anaty haino aman-jery sy ny zavatra hita amin’ny tambajotran-tserasera sasany nosokajiana fa mpomba ny fitondrana.
Fampihavanana, fifampiresahana, fifanarahana Tsy azo ihodivirana
Na oviana na oviana, na aiza na aiza, indrindra fa aty amin’ny tany tsy mitony tahaka antsika dia tsy hisy ho afa-po amin’ny zava-misy ao anatin’ny fireneny.
Governemanta Ntsay Christian Nahatanteraka ny filankevitra voalohany omaly
Nahatanteraka ny filankevitry ny governamanta voalohany natrehan’izy ireo teny amin’ny lapam-panjakana Mahazoarivo, omaly alakamisy 14 jona 2018 tolakandro ireo mpikambana ao amin’ny govenemantan’ny marimaritra iraisana tarihin’ny praiminisitra Ntsay Christian (tazana nivoaka avy tao amin’ny lapa Atoa Norbert Lala Ratsirahonana).
Izay mahafinaritra ihany…
Tsy maintsy Rabe no ataon'ialahy minisitry ny vola Amin'izay mba moramora kokoa ny manao kolikoly Dia Rasoa tendreo ho minisitry ny fitsaràna Milamina isika amin'izay isaky ny mandika lalàna.
FFKM Tsy hita popoka
Ny faran’ny volana aprily teo no nandrenesana sy nahitana farany ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara (FFKM) nitarika fanelanelanana ireo tompon’andraikitra politika eto amin’ny firenena tamin’ny alalan’ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana notontosaina tetsy Vohipiraisana.
Mpiasan’ny minisiteran’ny fanatanjahantena Nahazo toky tamin’ny minisitra, hiverina hiasa
Efa nihaona tamin’ny minisitra vaovao Faratiana Tsihoara Eugène izahay, ary faly miarahaba azy, hoy ny sendikan’ny mpiasa eo anivon’ny minisiteran’ny fanatanjahantena.
Fanokafana ny Mondial 2018 Ravan’ny Rosianina ny ady sahala nahazatra
Ravan’ny ekipa Rosianina omaly alakamisy 14 jona tao amin’ny kianja Loujniki ao Moscou ny ady sahala mahazatra amin’ny lalao fanokafana ny Mondial hatrizay fa nomontsaniny tamin’ny isa navesatra 5-0 ny ekipan’i Arabie Saoudite.
Ireo kianja handray ny Mondial 2018 (tohiny) Kianja iray hafa handray ny Mondial any Rosia indray no hatolotra anao eto amin’ity pejy ity anio .
Kianja Novgorod Stadium (Nijni Novogord) Ny Kianja Novgorod Stadium any amin’ny tanànan’i Nijni Novogord dia
Fifaninanam-pirenena rugby an-sekoly Efa-bolana no hanatanterahana ny andiany faha-2
Any Toliara no hanombohana ny dingana voalohany amin’ny fiadiana nasionalin’ny fifaninanana rugby an-tsekoly na “rugby scolaire” andiany faha-2 eto Madagasikara ny 15,16 ary 17 jona 2018 ka handraisan’ny solontenan’ny Faritra Atsimo Andrefan’ny nosy anjara.
Fanjakan’i Sodoma sy Gomoro ?
Raikitra ny fiadiana izay ho tompondaka eran-tany eo amin’ny taranja baolina kitra.
Lalana potika Fatiantoka tanteraka amin’ny rehetra
Sehatra iray azo hitarafana ny fandrosoan’ny firenena ny fahatsaran’ny lalana misy ao aminy. Raha ny eto Madagasikara manokana, ohatra, izay firenena miankin-doha tanteraka amin’ny fambolena dia ilaina ny fahatsaran’ny lalana hamoahana haingana ny vokatra any amin’ny faritra.
Fampianarana teknika Hiroso amin’ny fanatsarana ny minisitra vaovao
Laharam-pahamehana ny fikarakarana ny fifidianana saingy tsy maintsy hatsaraina faran’izay haingana ny fampianarana teknika, hoy ny minisitra vaovao Rahantasoa Lydia Aimée omaly nandritra ny famindram-pahefana teo aminy sy ny minisitra teo aloha Raharimalala Marie Lydia.
Fifaninanana manamboatra “Robot” Tanora Malagasy 5 no hifaninana any Mexico
Hotanterahina any Mexico amin’ny 15 ka hatramin’ny 18 aogositra ho avy izao ilay fifaninanana manamboatra robot andiany faharoa karakarain’ny “First Global Challenge”.
Fanomezan-drà Ny 15 % n’ny Malagasy no afaka manao azy
Tsy dia mavitrika amin’ny fanomezan-dra amin’ny ankapobeny isika eto Madagasikara. Araka ny fanazavan’ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka vaovao Atoa Rakotomalala, mbola vao ny 15 %-n’ny Malagasy no manao izany ka ny vehivavy no betsaka.
Politika ara-bola eto Madagasikara Tokony hanatsara ny tontolon’ny fampindramam-bola
Nanapa-kevitra ny hampiakatra ny taha torolalanany (taux directeur : TD) ny banky foiben’i Etazonia (Federal Reserve System) tamin’ny alarobia 13 jona farany teo.
Minisiteran`ny filaminana anatiny Laharam-pahamena ny ady amin’ny “kidnapping”
Tontosa omaly alakamisy 14 jona maraina ny famindram-pahefana teo amin`ny minisitry ny filaminam-bahoaka teo aloha, ny controleur general de police Mamy Jean-Jacques Andrianisa sy ny minisitra vaovao,
Naverina eny anivon’ny borigady Betongolo ny dosie mahakasika an’i Maurice Tsihavonana izay nohenoina teny amin’ny fampanoavana omaly.
Zokiolona Maro ireo narian’ny zanany sy ny havany
Maro ireo zokiolona tsy manam-piahy intsony eto amintsika fa narian’ny zanany sy ny fianakaviany. Ho an'ireo tsy manan-janaka dia maro amin’izy ireo no misy manatitra eny amin’ny Foyer de vie Andrainarivo, izay hany toerana tokana eto an-drenivohitra afaka mandray azy ireny.
Tsenan’Ivato vaovao Mahazaka mpivarotra 2.200
Taorian’ny fametrahana ny vato fototry ny asa fanamboarana ny tsenan’Ivato vaovao dia nafindra eny amoron-dalana avokoa ireo mpivarotra rehetra ao an-toerana ankehitriny.
Fivarotana eo amin’ny EPP Soarano Naato ny fifanarahana tamin’ny sinoa
Efa tapitra tamin’ny taona 2016 ny fifanarahana tamin’ny sinoa nampiasa sy mitantana ny toeram-pivarotana eo amin’ny EPP Soarano, izay hiadidian’ny Kaominina Antananarivo (CUA).